Paul Scholes oo dhaleeceeyay Alexis Sánchez: “Ma jiro wax ka sii xun” – Gool FM
Paul Scholes oo dhaleeceeyay Alexis Sánchez: “Ma jiro wax ka sii xun”
Dajiye May 20, 2018
(Man United) 20 Maajo 2018. Halyayga kooxda Manchester United Paul Scholes ayaa wuxuu dhaleeceen u jeediyay xidiga kooxda Red devils Alexis Sanchez, taasoo tan iyo markii uu yimid Old Trafford suuqii bisha janaury soo bandhigay qaab ciyaareed aan wanaagsaneen.
Hadalkan kasoo yeeray Paul Scholes ayaa wuxuu imaanayaa kadib guuldaradii 1-0 ahayd kooxdiisii hore Manchester United kasoo gaartay Chelsea kulankii xalay ee finalka FA Cup.
Scholes ayaa sheegay in Sanchez uu qaatay xili ciyaareed aad u xun, laakiin wuxuu ka dalbaday inuu kaalin hoggaamineed ka ciyaaro xilli ciyaareedka soo aadan, sida Eden Hazard uu ula shaqeynayo Chelsea.
Halyayga kooxda Manchester United Paul Scholes ayaa ugu horeyn u sheegay laacibka reer Chile: “Sanchez waxqabadkiisa waa inuu noqdaa mid daacad ah.”
“Kulamada ugu horeysay ee xilli ciyaareedka soo socda wuxuu noqon doonaa mid muhiim u ah isaga, wuxuu u baahan yahay inuu mar kale jamaahiirta ku qanciyo awoodiisa ciyaareed, isla markaana uu dareensiiyo awooda ay kula dagaalami karaan Man City, waxay u baahan yihiin xidig weyn”.
“Sanchez ka hor suuqii Janaayo qof kasta wuxuu u qabay inuu u ciyaari karo sida ugu fiican, lakiin waxaan aragnay wax ka duwan sida la filayay”.
“Manchester United waxay u baahan tahay ciyaartoy nasiib leh, waxay heystaan ciyaaryahano waa weyn, laakiin ma heystaan tayada Hazard, Ronaldo ama Messi, waan ogahay in kooxo badan aysan heysan ciyaartoydan, laakiin farqiga u dhexeeya United iyo Chelsea waa tayada Hazard, waxaan ku aragnay taas kulan waaweyn”.
Ramos oo ka warbixiyay hubka ugu weyn ay u adeegsan doonaan Liverpool kulanka finalka Champions League
Gabar Xalay si Xun u Bahdishay mid ka mid ah xiddigaha ugu Muhiimsan Juventus!!...(DAAWO wixii dhacay)